Mararoo Gaa’eelaa ykn Warroommii – siifsiin
Afoolli Oromoo hambaa abaabileefi akaakileerraa jecha afaaniitiin dhalootarraa dhalootatti darbaa dhufe; ammas darbaa kan jiru; fuula duras darbaa kan jiraatuudha. Kana jechuun Ummanni Oromoo durii kaasee yaada, ilaalcha, ergaa, falaasama, fedhiifi abdiisaa, gaddaafi gammachuu qabu afoolaan dabarsaa ture jechuudha. Kanaafuu, Afoolli Oromoo hambaa ganamaafi calaqqee aadaa Oromooti.
Gabaabumatti, afoolli Oromoo dilbii bara dheeraati; cirracha bishaaniitis. Waraabamee, lakkaawamee, akkasumas dhamdhamamee kan dhumu miti. Kanaafuu barreeffama kana keessatti afoola akka galaanaa Ummanni Oromoofi golli Oromiyaa qabdu keessaa mararoo gaa’elaa irratti xiyyeeffachuun kan dhiyeessinu ta’a.
Aadaa gaa’elaa ykn warroommii keessatti mararoon gaa’elaa shamarran Oromoo biratti baay’ee kan jaalatamuudha. Xiyyeeffannaan weedduu saaniis tokko soddaa arrabsuu ykn ceepha’uudha. Kan biroo immoo mararoo ykn seenaa dhaamuudha.
Durbi Oromoo heeruma irratti boohaa kan mararoo dhaaman sababii maatiifi qomoo saaniirraa adda bahuu waan jibbaniif qofaa miti. Fedhii malee heerumuun, umurii malee heerumuufi wkf. Sababii biroo ta’uu ni malu. Fakkeenyaaf durbi tokko fedhii ishee malee heerumuushii walaloo mararootiin yoo ibsattu akkas jechuun weeddisti:
Hin afiin ajjeerradhuu
Hin rafiin dhaggeeffadhuu
Farsoo hin baanettoo
Nama hin taanettoo
jechuun nama hin taaneefi fokkosaatti heerumuu shee ibsatti.
Umriin ishii osoo hin ga’iin kan heerumsiisan yoo ta’e immoo komee qabdu akkas jechuun weeddifti.
Harmi koo hin baanee
Laanni koo hin geenyee
Anoo beekee hin buluu.
Cabaawoo hin tuffannee
Darbaawoo hin dubbannee
Na jala buutee
Hin geenyeen geessee
Guyyaa kennaa koo
Gaafa torbee koo
Gaafa kurnoo koo
Malli funyoo koo.
jechuun heerumaaf kan hin geenye ta’uu shii wantoota adda addaa wabeeffachuun ibsiti.
Komeen durbaa mararoo keessatti calaqqisu inni kan biraa otoo hin jaalatiin horiin ykn qarshiin jijjiiramuudha. Walaloon armaan gadiillee kanuma dhugoomsa.
Murmurtu hin seenee
Gurgurtu hin seenee
Eebichi yo murmuran
Ol hin arreedu
Natti hin barreedu
Gulantaa hin darbu
Gudunfaa hin argu
Qarreen koo hin galtuu
Garaan koo hin fayyuu.
Manni abbaa hundee hin taatuu
Boobee laga hin dhaabinii
Boossee nama hin raasinii.
Gama birootiin hiriyyoonni shee eega heerumtee booda mala ittiin buluu qabdus yoo gorsan akkas jechuun weeddisu:
Mana hin aarsinii
Maal nyaatte jedhaa
Cal jettee hin taa’inii
Maal yaadde jedhaa
Minjee hin gaggeessinii
Maal dhaamte jedhaa
Ibiddi hin dhaaminii
Gandaa si hin waaminii.
Sii kennan nyaadhuu
Siin jedhan baadhuu
Intalli heerumtu marartee haadhaafi hiriyyoota isheetiif qabdus karaa adda addaatiin weedduu mararootiin ibsatti. Fakkeenyaaf durbi tokko yeroo mana warraa jirtutti hojii mana keessaatiinis ta’ee hojii alaatiin haadha ni gargaarti. Yeroo heerumtu garuu gargaarsi kun ni hafa. Ba’aan hojii mana keessaa hundumtuu haadharratti dabalama jechuudha. Kanaaf, ulfina hojii sanaa waan beektuuf guyyaa heerumaa walaloo tarreessitee boo’aa akkas jechuun marartee haadhaaf qabdu mul’ifti.
Mukti hirkoo cabee
Hundumtuu ni sobaa
Situ iddoo dhabee.
Amma na yaaddaa
Gadi jedhuun dhibnaan
Yoo gabaa galtuu
Beelli kee hin hafuu
Dhagahee hin dhufuu
Anaan haa cufu.
Yommuu na yaadduu
Mararoo armaan olii keessatti boo’icha durbaatiif sababii kan ta’u tokko haadhaaf yaaduu akka ta’e yoo hubatamu, karaa biraammoo ga’een durbaa haawaasicha keessatti maal akka fakkaatu hubachuun ni danda’ama.
Gama biraatiin immoo hiriyee durbaa isheetiif marartee qabdu yoo ibsitu akkas jetti:
Hodhi naan jedhu
Maal jedheen hodhaa
Obsi naan jedhuu
Maal jedheen obsaa?
Mala naa malii.
Gargar nu kutee
Wal argaan keenya
Waluu hin argani.
Jechaa, jaalala hiriyoota kan yeroo dheeraaf dhandhamachaa turte yaadattee boossi.
Egaa aadaa gaa’elaa ykn warroommii keessatti mararoon gaa’elaa shamarran Oromoo biratti beekaman kana qofaa miti. Oromiyaan akkuma bal’ina ishee afoola dhimma kana wajjin wal fakkaatan hedduu ni qabdi. Dhimmoota akkasii kanneen sakatta’anii, waraabanii, qindeessanii barreeffamaan dhaloota dhufuuf dabarsuun dirqama hayyoota Oromoo mara irraa eeggamudha. Barreeffamoonni akkasii yoo dhufan immoo barruun Siifsiinii simattee Ummata Oromoo biraaan gahuuf yoomiyyuu taanaan qophiidha. Dubbistoota keenya yaadnniifi deeggarsi keessan hojii keenya gara fuula duraatiif waan nu gargaaruuf nutti hin qusatinaa jenna. Horaa bulaa!
Dirribaa Tarrafaa .Giddu gala aadaa Oromootti,Qindeessaa Garee Moggaasa jechootaafi Waaltina Afaan Oromoorraa
Previous Previous post: Yaa biyyo Nanyaadhu
Next Next post: Save the Children Baraarsa Daa’immanii(Save the Children) Waajjira Damee Naannoo Amboo